3 Aman+ yi na Yehowa gyaw wɔn wɔ asase no so sɛ ɔde wɔn bɛsɔ Israel ahwɛ+ no, wɔn a wɔanhu ɔko a ɛkɔɔ so wɔ Kanaan no nyinaa,+ 2 sɛnea ɛbɛyɛ a Israel awo ntoatoaso a wonhuu biribi a ɛte saa da no besua akodi na wɔanya ɔko mu osuahu. 3 Eyinom ne Filistifo+ ahene+ baanum no ne Kanaanfo+ nyinaa, ne Sidonfo+ ne Hiwifo+ a wɔte Bepɔw Lebanon+ so fi Bepɔw Baal-Hermon+ ho kosi Hamat no.+ 4 Na wɔde wɔn sɔɔ Israelfo hwɛe+ sɛ wobedi mmara a Yehowa nam Mose so de maa wɔn agyanom no so anaa.+ 5 Enti Israelfo tenaa Kanaanfo,+ Hitifo, Amorifo, Perisifo, Hiwifo, ne Yebusifo+ mfinimfini. 6 Wɔfaa wɔn mmabea waree,+ na wɔde wɔn mmabea nso maa wɔn mmabarima,+ na wɔsom wɔn anyame.+ 7 Enti Israelfo yɛɛ bɔne wɔ Yehowa ani so, na wɔn werɛ fii Yehowa wɔn Nyankopɔn+ na wɔkɔsom Baal ahoni+ ne abosonnua.+ 8 Na Yehowa abufuw dɛw hyɛɛ Israelfo+ na ɔtɔn+ wɔn hyɛɛ Mesopotamia+ hene Kusan-Risataim nsa; na Israelfo som Kusan-Risataim mfe awotwe. 9 Ɛnna Israelfo su frɛɛ Yehowa,+ enti Yehowa maa Israelfo no ogyefo+ bi a obegye wɔn. Ɔno ne Kaleb+ nua kumaa Kenas+ ba Otniel.+ 10 Yehowa honhom+ baa no so na ɔbɛyɛɛ Israel temmufo. Na bere a ofii adi kɔkoe no, Yehowa de Siria hene Kusan-Risataim hyɛɛ ne nsa na odii Kusan-Risataim so nkonim.+ 11 Afei asase no so dwoe mfe aduanan. Akyiri yi, Kenas ba Otniel wui. 12 Na ntɛm ara na Israelfo kɔɔ so yɛɛ bɔne wɔ Yehowa ani so.+ Na Yehowa maa Moab+ hene Eglon ho yɛɛ den boroo Israel so,+ efisɛ wɔyɛɛ bɔne wɔ Yehowa ani so.+ 13 Na ɔde Ammonfo+ ne Amalekfo+ nso baa wɔn so, na wokunkum Israelfo na wɔfaa mmɛ kurow+ no. 14 Na Israelfo som Moab hene Eglon mfe dunwɔtwe.+ 15 Afei Israelfo fii ase su frɛɛ Yehowa,+ enti Yehowa maa wɔn ogyefo bi. Oyi ne Gera ba Ehud,+ Benyaminni+ a ɔyɛ abenkumma no.+ Na Israelfo faa no so de ayɛyɛde kɔmaa Moab hene Eglon. 16 Na Ehud yɛɛ nkrante anofanu+ a ne tenten yɛ basafa biako. Ɔde bɔɔ n’asen wɔ n’atade ase, nifa so.+ 17 Afei ɔde ayɛyɛde no kɔmaa Moab+ hene Eglon. Ná Eglon yɛ ɔbarima a ɔso yiye. 18 Bere a ɔde ayɛyɛde+ no maa no wiei ara pɛ na ogyaa wɔn a wɔde ayɛyɛde no bae no kwan. 19 Wokoduu abopaebea a ɛwɔ Gilgal+ no, ɔsan n’akyi bɛka kyerɛɛ ɔhene no sɛ: “O ɔhene, mepɛ sɛ me ne wo ka asomsɛm bi.” Enti ɔkae sɛ: “Twɛn!” Afei wɔn a wogyina ne nkyɛn nyinaa fii adi.+ 20 Na Ehud baa ne nkyɛn bere a ne nkutoo te n’abansoro pia mu, baabi a ɛhɔ dwo no. Na Ehud ka kyerɛɛ no sɛ: “Mewɔ asɛm bi fi Onyankopɔn hɔ ma wo.” Ɔtee saa no, ɔsɔre fii n’agua so. 21 Ɛnna Ehud de ne nsa benkum twee nkrante no fii n’ataaso wɔ ne nifa, na ɔde wɔɔ ne yam. 22 Wantwe nkrante no amfi ne yam, enti dade no ne dua no nyinaa wuraa ne yam ma srade yɛɛ ho, na tiafi dii so bae. 23 Na Ehud totoo abansoro dan no apon mu wɔ n’akyi, na ɔfaa tokuwa mu puei. 24 Na ofii adi kɔe.+ Na ne nkoa bɛhwɛe, na wohui sɛ wɔatoto abansoro apon no mu. Enti wɔkae sɛ: “Ɛbɛyɛ sɛ ɔregya n’anan+ wɔ pia mu hɔ.” 25 Wogyinaa hɔ kyɛe. Afei na wɔn ani awu, efisɛ obiara ammue pia no apon no. Enti wɔfaa safe buei, na wɔnkɔhwɛ a, wɔn hene na ɔda fam tim a wawu yi! 26 Bere a wɔda so gyinagyina hɔ no, na Ehud kɔ dedaadaw. Oguan kɔfaa abopaebea+ hɔ kɔɔ Seira. 27 Oduu hɔ no, ofii ase hyɛn abɛn+ wɔ Efraim+ bepɔw no so, na odii Israelfo no anim ne wɔn sian fii bepɔw no so. 28 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munni m’akyi+ efisɛ Yehowa de mo atamfo Moabfo no ahyɛ mo nsa.”+ Enti wodii n’akyi, na wɔko faa Yordan asutwaree+ no siw Moabfo no kwan, na wɔamma obiara amfa hɔ. 29 Saa bere no wokunkum Moab mmarima akantinka+ ahoɔdenfo bɛyɛ mpem du;+ obiako mpo antumi anguan.+ 30 Saa da no, Israel dii Moab so nkonim, na asase no so dwoe mfe aduɔwɔtwe.+ 31 N’akyi no, Anat ba Samgar+ nso gyee Israelfo fii Filistifo+ nsam, na ɔde poma a wɔde ka anantwi kokunkum mmarima ahansia.+